Ulwakhiwo / ukumbiwa kwemigodi - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Ukwakhiwa / ukumbiwa kwemigodi
Yintoni iSmart City
Usetyenziso lokwenyani lweSmart City
Iikhamera zeRainpoo oblique zinceda kwiiprojekthi zeSmart City
Zithini iikhamera ze-oblique ezisetyenziselwa ulwakhiwo / ukumbiwa kwemigodi
Ngesoftware yemephu ye-3D, inokulinganisa ngokuthe ngqo umgama, ubude, indawo, ivolumu kunye nolunye ulwazi kwimodeli ye-3D .. Le ndlela ikhawulezayo kwaye ingabizi kakhulu yokulinganisa ivolumu iluncedo ngokukodwa ukubala istokhwe kwimigodi nakwiikwari ukulungiselela iinjongo zoluhlu okanye zokujonga.
Ukubeka iliso kunye nokucwangciswa kokusebenza
Ngemodeli echanekileyo ye-3D eveliswe kwiikhamera ze-oblique, abaphathi bezokwakha / bezemigodi ngoku banokuyila ngokufanelekileyo kwaye balawule ukusebenza kwesiza ngelixa besebenzisana namaqela. Kungenxa yokuba banokuvavanya ngokuchanekileyo umthamo wezinto ekufuneka zikhutshwe okanye zihanjiswe ngokungqinelana nezicwangciso okanye imigangatho yezomthetho.
Uvavanyo ngaphambi nasemva kokwemba okanye ukuqhumisa
Ngokusebenzisa iikhamera ze-oblique kwimigodi, uvelisa iindleko ze-3D ezingenaxabiso kunye nokufikeleleka kunye nemodeli yomphezulu weendawo eziza kuqhushumba okanye zokugrumba. Ezi modeli zinceda ngokuhlalutya ngokuchanekileyo indawo eza kubethwa kwaye ubale umthamo oza kukhutshwa emva kokuqhushumba. Le datha ikuvumela ukuba ulawule ngcono izixhobo ezinje ngenani leelori ezifunekayo. Uthelekiso olwenziweyo kuphando olwenziwe ngaphambi nasemva kokuqhushumba luya kuvumela ukuba inani libalwe ngokuchanekileyo. Oku kuphucula ukucwangciswa kuqhushumbo oluzayo, ukunciphisa iindleko zeziqhushumbisi, ixesha lesiza kunye nokubhola.
Kutheni usebenzisa iidrones kunye neekhamera ze-oblique kulwakhiwo / kwimigodi
Ngenxa yokuxakeka lulwakhiwo kunye nemigodi, ukhuseleko lwabasebenzi yinto ephambili. Ngeemodeli zesisombululo esiphakamileyo esivela kwikhamera ye-oblique, unokujonga enye indlela ekunzima ukufikelela kuyo okanye iindawo eziphithizelayo zesiza, ngaphandle kokubeka wena nabasebenzi engozini.
Iimodeli ze-3D ezakhiwe ziikhamera ze-oblique zifezekisa ukuchaneka kwenqanaba lophando kunye nexesha elincinci, abantu abambalwa, kunye nezixhobo ezincinci.
Ulawulo kunye nokuhanjiswa kweprojekthi kunokugqitywa kwimodeli ye-3D ngaphandle kwemisebenzi eya kwisiza ukwenza le misebenzi, eya kuthi inciphise indleko.
Umsebenzi omninzi wagqithiselwa kwikhompyuter, eyagcina kakhulu ixesha elipheleleyo leprojekthi